Café Archives - IntoKildare
Na te-hisotro kafe ianao, na mipetraka sy miala sasatra ary mijery izao tontolo izao dia manana kafe maro i Kildare mifanaraka amin'ny tsiro rehetra.
Manomboka amin'ny sotasota tsara tarehy ka hatrany amin'ny mpivarotra varotra sy zava-manitra kanto dia ho simba amin'ny safidy amin'ny datin'ny kafe manaraka ianao.
Thai Asian Indian Sinoa Espaniola Italiana Vegan / legioma Malagasy Irlandey / eropeana Modern episeria fy frantsay
Gastro-Pubs Sakafo mahazatra Ny fisakafoanana ivelany Live Music Dite amin'ny hariva Fine Dining
Firecastle dia mpivarotra asa-tanana, sakafo matsiro, mpivaro-mofo ary kafe misy sekoly fandrahoan-tsakafo ary efitrano fandraisam-bahiny 10 en suite.
fiantsenanatrano fisotroana kafeHotels
Safidy zavamaniry lehibe indrindra any Irlandy sy Garden Store ao anaty tontolo iainana maoderina mamirapiratra, kafe sy zaridaina kafe.
fiantsenanatrano fisotroana kafe
Toeram-panompoana an-dalamby izay mijanona eo ivelan'ny M7 ao Monasterevin, fijanonana tonga lafatra amin'ny dia ataonao.
Traikefa amin'ny toeram-pambolena sy fiarahana misokatra amin'ny fianakaviana, izay ahitanao ireo biby fiompy isan-karazany amin'ny toerana voajanahary sy milamina.
Outdoorstrano fisotroana kafe
Ankafizo ny fiantsenana an-kalamanjana eny an-kalamanjana ao amin'ny Village Kildare, feno boutiques 100 manolotra tahiry mahatalanjona.